Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Iraniana Mitolona Ho Amin’ny Fahasalamana Sy Ny Fahalalahana Taorian’ny 18 Andro Nitokonana Tsy Nihinan-kanina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Avrily 2016 8:07 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Mitolona ho amin'ny fahasalamany sy ny fahalalahany i Hossein Ronaghi Maleki  ilay mpikatroka sady bilaogera gadra manohitra ny fanapenam-bava. Nanomboka nitokona tsy hihinan-kanina izy tamin'ny 26 Martsa mba hanohitra ny fandavan'ny manampahefan'ny fonja tsy hanome fitsaboana sahaza ho azy ary mitaky ny famotsorana azy. Miharatsy vetivety ny fahasalamany ankehitriny.
Araka ny fifandraisana eo amin'i rain'i Maleki sy ny Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona ao Iran (ICHRI),  “norahonan'ny manampahefana izy fa raha miloa-bava momba ny raharaha mahakasika azy ny fianakaviany, dia hafindra any amin'ny fonja Rajaee Shahr”, ao an-tanàna avaratra ao Karaj. Malaza amin'ny fepetra ratsy,  indrindra ho an'ny gadra politika ny Rajaee Shahr. Nilaza ny tatitra teo aloha fa voafetra ny fitsidihan'ny olona ao na tsy azo atao mihitsy.
Hanamarika ny faha-20 andro nitokonany tsy hihinan-kanina i Maleki amin'ny Alakamisy 14 Aprily. Miantso ny fikambanana iraisam-pirenen'ny mpikatroka sy ny teknolojista mijoro ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahazoam-baovao ireo mpanohana azy mba hanandratra ny feon'izy ireo ho an'i Maleki amin'ny fampiasana ny diezy #NoJail4Hossein .
Nosamborina tamin'ny Desambra 2009 i Maleki, enim-bolana taorian'ny fifidianana filoham-pirenena nahabe adihevitra tao Iran. Nampidirina am-ponja avy hatrany tao amin'ny fonja malaza Evin izy, natoka-toerana nandritra ny 376 andro alohan'ny niakarana fitsarana tamin'ny 2010. Nitarika ny fanagadrana azy 5 taona an-tranomaizina izany noho ny fiampangana azy ho “nanaparitaka fampielezan-kevitra manohitra ny fitondrana”, “mpikambana ao amin'ny vondrona aterineto Iran Proxy ” ary “nanevateva ny mpitondra fara-tampon'ny Iraniana sy ny filoha.”
Navotsotra tamin'ny 2015 tao anatin'ny fahafahana vonjimaika nandritra ny enimbolana mba hitsabo tena noho ny aretin'ny voa i Maleki, saingy naverina tany am-ponja indray ny 19 Janoary 2016. Natao ny famerenana azy tany am-ponja na dia teo aza ny tolo-kevitra  avy amin'ny Mpitsabo fa tsy mety amin'ny fahasalamany ny rafi-pamonjana Iraniana. Fanao mahazatra amin'ny gadra politika sy ny gadran'ny fanehoan-kevitra ny fandavana ny fitsaboana ho azy ireo.
Mandrisika ireo mpanohana mba hanome fitantarana betsaka araka izay azo atao momba an'i Maleki ny ekipa Iran sy ny Advox ato aminy Global Voices amin'ny alalan'ny fizarana ny manjò azy ao amin'ny media sosialy, ary mampiasa ny diezy #NoJail4Hossein . Azo alefa amin'ny alalan'ny fametrahana ny anaran'ny Filoha Hassan Rouhani na ny Mpitondra Faratampony ihany koa ny antso. Alefa amin'ny teny Anglisy any amin'ny @HassanRouhani  sy @Khamenei_ir ny sioka. Alefa any amin'ny @Rouhani_ir  sy @Khamenei_fa  kosa ny sioka amin'ny teny Persiana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/13/81335/
 Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'Olombelona ao Iran : https://www.iranhumanrights.org/2015/03/hossein-ronaghi-maleki/
 fepetra ratsy,: https://www.hrw.org/report/2014/08/18/locked-karaj/spotlight-political-prisoners-one-iranian-city
 tatitra teo aloha : https://www.iranhumanrights.org/2011/11/mahmoudian-surgery/
 fanagadrana azy 5 taona an-tranomaizina : http://www.chrr.biz/en/statement-en/20111
 @Khamenei_ir : https://twitter.com/khamenei_ir